कुनै समय रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नोरा फतेही अहिले यसरी भईन बलिउडकी कुइन् (हेरौ तस्बिरहरू) – Kavrepati
Home / मनोरंजन / कुनै समय रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नोरा फतेही अहिले यसरी भईन बलिउडकी कुइन् (हेरौ तस्बिरहरू)
admin August 28, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 120 Views
नोरा फतेहीको नृत्य कौशलले सबैलाई प्रभावित पारिरहेको छ । क्यानाडामा जन्मिएको नोराले हिन्दी, तेलगु, मलयालम र तमिल भाषा फिल्महरूमा आफ्नो प्रतिभा देखाईसकेकी छिन् ।
उनी क्यानाडा जन्मिएतापनी उनको आमा ईन्डियन थिईन त्यसैले उनलाई ईन्डिया आउइन् । उनीकाे स्कुल जीवन सकेपछि परिवारमा समस्याहरु बढ्दै गए । उनलाई बाल्यकाल देखिनै बलिउडमा पाईला राख्ने रहर थियो ।
यस्तै उनको रुमलिएको रहर बिच मोडलिङ एजेन्सीको कन्ट्याक्ट्मा भारत आईन । बिस्तारै उनले बिज्ञापन खेल्न थालिन् । यसले मात्र दैनिकी चलाउन उनलाई मुस्किल भयो । त्यसपछी उनले दिउँसो रेष्टुरेन्टमा वेटरको रुपमा काम गर्न थालिन । यतिमात्र होईन रातको समयमा उनले टेलि सेन्टरमा पनि काम गरिन । बिचको बाकी समयमा भने उनले मोडलिङलाई दिईन । उनको जिन्दगी निकै मुश्किल बन्दै गएपछी धेरै पटक क्यानडा नै फर्केने निधो गरिन । तर पटकपटक विभिन्न कारणले मुम्बईमा नै रोकिन पुगिन ।
तर मेहेनती नोरालाई २०१४ मा भाग्यको बाटो खुल्यो । उनलाई टाईगर अफ सुन्दरबनमा काम गर्ने मौका मिल्यो । यो फिल्म फ्ल्वप भएर गयो तर नोरालाई भने केही हदसम्म फाईदा नै हुन गयो ।
यसै समयमा ईन्डस्ट्रीका धेरै ब्यक्तिलाई चिन्ने मौका पाएकी थिईन । सन् २०१५ मा उनलाई बिग बोस मा जाने मौका मिल्यो । बिगबोसमा रहदा उनलाई धेरैले चिन्न थाले ।
यस्तैमा उनलाई चर्चित रियालिटी शोमा काम गर्ने मौका मिल्यो । जसको नाम थियो झलकदेखालाजा । नोरा आफ्नो नृत्यमा बिस्वस्त थिइन् उनले आफ्नो नृत्यक जल्वा देखाईन । यो शोमा नोराको डान्स देखेपछी धेरै निर्माता, निर्देशकको नजरमा परिन् ।यसपछी उनको जिन्दगिको ढोका खुल्यो । उनले चर्चित मुभी बाहुबलीमा काम गर्ने मौका पाईन । यस्तै अर्को मुभि पापला हाउसमा दिलबर दिलबर गीतमा उनको डान्सले धेरैलाइ फिदा बनायो र उनी एकाएक चर्चित बनिन् ।
अहिले बलिउडमा आईटम डान्समा उनको नाम टप लिस्टमा आउछ । अहिले बलिउडमा उनको राज चलिरहेको छ । उनले धेरै फिल्म, रियालिटी शोहरुमा काम पनि गरिसकेकी छिन । उनको सुन्दर शरीर र नृत्य हेर्न कयौं लालायित छन् ।
नोरा बेलाबेलामा ड्रेसअपको कारणले पनि चर्चामा आईरहन्छिन । बलिउडकी अभिनेत्री नोरा फतेही नयाँ नयाँ फोटोशुट गर्न रिचाउछिन । उनको नयाँ तस्बिरले सामाजिक सञ्जाल तताउने गरेको छ । उनले क्यामेरामा का-मुक लुक्स दिने गरेकी छिन् । जसले धेरैको ध्यान खिँचेको छ ।
नोरा सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा धेरै नै सक्रिय छिन् । उनी अहिले साउथ देखि बलिउडसम्मका फिल्मका पप गीतको भिडियोमा खेल्न व्यस्त छिन् । बलिउडमा ‘हाय गर्मी’ नामक गीतमा नृत्य गरेर सबैलाई घायल पारेकी नोरालाई पछ्याउँने प्रशंसकको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । नोरा विभिन्न कारण चर्चामा पनि अाइरहन्छिन् ।
Previous एक युवकको त्यो कि’सले अर्बपति बनिन् काइली
Next किन बिग्रिन्छ महिनावारी ? यस्ता छन् महिनावारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा !
हास्य सिरियल ‘भद्रगोल’मा ‘बले’को भूमिकाबाट चर्चामा आएका सागर लम्साल पछिल्लो समय म्युजिक भिडिओमा पनि निकै …